HVAC စနစ် ထုတ်ကုန်များ
valve ကို မှန်ကန်စွာရွေးချယ်နည်း
Brass Ball Valve ကိုယ်ထည်၏ သံချေးတက်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်ခြင်းသည် အဓိကအားဖြင့် မှန်ကန်သော ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုအပေါ် အခြေခံသည်။ သံချေးတက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ ပေါများသော်လည်း၊ သံချေးတက်ခြင်းပြဿနာသည် အလွန်ရှုပ်ထွေးသောကြောင့် မှန်ကန်သောပစ္စည်းကို ရွေးချယ်ရန် မလွယ်ကူပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ sulfuric acid သည် အလွန်အဆိပ်သင့်စေသော...
1. ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို ရွေးချယ်မှုအရ အမျိုးမျိုးသောအဆို့ရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဆောင်ချက်များရှိပြီး ရွေးချယ်သည့်အခါ ၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များကို အာရုံစိုက်သင့်သည်။ 2. လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများ ရွေးချယ်မှုအရ၊ အသုံးများသော Brass Ball Valve ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များသည် အလုပ်လုပ်ခြင်းပါ၀င်သည် ။
WDK သည် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ တည်ထောင်ခြင်း နှစ် ၁၀၀ ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနား
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ တည်ထောင်ခြင်း နှစ် ၁၀၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် ကျန်းမာသော တရုတ်နိုင်ငံ၏ 2030 လုပ်ဆောင်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်၊ အမျိုးသားကြံ့ခိုင်ရေး စည်းမျဉ်းများကို မြှင့်တင်ရန်၊ နွေရာသီသို့ ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူ လူတိုင်း အလုပ်ဖိအားများ လွတ်မြောက်စေရန်၊ ဆက်သွယ်ရေး မြှင့်တင်ရန်နှင့်၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခ...
1. အဆို့ရှင်ကို တပ်ဆင်သည့်အခါ အတွင်းပိုင်းနှင့် အလုံပိတ်မျက်နှာပြင်ကို သန့်ရှင်းရန် လိုအပ်ပြီး၊ ချိတ်ဆက်ထားသော bolts များကို အညီအမျှ တင်းကျပ်ထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပြီး ထုပ်ပိုးမှု သေးငယ်ခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ 2.တပ်ဆင်သည့်အခါအဆို့ရှင်ကိုပိတ်ထားသင့်သည်။ 3. ကြီးမားသောအရွယ်အစား gate valve နှင့် pneumatic control valve တို့သည် b...
21-06-19 ရက်နေ့တွင် admin မှ
လျှပ်စစ်အဆို့ရှင်တွင် အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခု၊ အစိတ်အပိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းကိရိယာနှင့် အစိတ်အပိုင်းအဆို့ရှင်တို့ ပါဝင်သည်။ valve switch power သည် electric actuator မှလာသည်။ လျှပ်စစ်အဆို့ရှင်သည် အသုံးပြုရပိုအဆင်ပြေသောကြောင့် ၎င်းကို အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင်ပမာဏနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပါဝါထောက်ပံ့မှုဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။
2021 ခုနှစ်တွင် 1st Yuhuan Plumbing Valve Exhibition ကို စက်တင်ဘာလကုန်တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။
Yuhuan သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ မွေးရပ်မြေဖြစ်သည်။ 2020 ခုနှစ်တွင် Yuhuan ရေပိုက်အဆို့ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်း၏ထွက်ကုန်တန်ဖိုးသည် ယွမ် 39.8 ဘီလီယံအထိရောက်ရှိခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံရှိ အလားတူထုတ်ကုန်များ၏ စုစုပေါင်းထွက်ရှိမှုတန်ဖိုး၏ 25% ခန့်ရှိသည်။ ထုတ်ကုန်များကို နိုင်ငံနှင့် ဒေသပေါင်း ၁၃၀ ကျော်သို့ တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိသည်။ Plumbing valve က အကြီးဆုံး...
2021 ခုနှစ်အစကတည်းက၊ ကြေးတုံးစျေးသည်လူမှုရေးအရစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာသည်။
admin မှ 21-03-06 ရက်နေ့
2021 ခုနှစ်အစကတည်းက၊ ကြေးတုံးစျေးသည်လူမှုရေးအရစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာသည်။ နှစ်သစ်ကူးနေ့အပြီးတွင် ကြေးတုံးဈေးသည် ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းကျော် တက်လာခဲ့သည်။ 2021 ခုနှစ် နွေဦးပွဲတော် အပြီးတွင် ကြေးနီဈေး ဆက်တိုက် တက်လာပြီး စျေးနှုန်း စံချိန်တင် မြင့်မားလာသည်ကို သတိပြုသင့်သည် ။
COVID-19 ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။
21-01-23 ရက်နေ့တွင် admin မှ
2020 ခုနှစ်တွင် COVID-19 ကြောင့် ထိခိုက်ခဲ့သည်။ တရုတ်နှင့် ဥရောပကြား ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှု စရိတ်စကသည် အွန်လိုင်းမှ ဈေးဝယ်မှု အရှိန်အဟုန်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ကူးစက်ရောဂါ ပိတ်ဆို့ခြင်းများကြောင့် မြင့်တက်လာပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကွန်တိန်နာများနှင့် ဆိပ်ကမ်း ဝန်ထမ်းများ အလွတ်ရှားပါးမှုသည် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှုကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသည်။ သင်္ဘောတင် ကွန်တိန်နာ ဈေးနှုန်းများ ပြန်လည်ကျဆင်းလာ...
မိတ်ဖက်များအား စျေးကွက်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ကူညီပေးပါ။
admin မှ 20-09-18 ရက်နေ့တွင်
ဖေဖော်ဝါရီ 26၊ 2018 တွင် Vice President အရောင်း Lihong Chen သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Bromic Group သို့လာရောက်လည်ပတ်ပါသည်။ မိတ်ဖက်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးကာ စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ပါတနာကိုကူညီဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ အဓိကထုတ်လုပ်မှုတွင်- Quarter Turn Supply Valve ၊ Multi Turn Supply Valves ; F1960&F1...